महिनावारीमा यी ५ रंगको रगतबाट थाहा पाउनुस् आफु स्वस्थ छु कि छैन भनेर -
महिनावारी महिलाको जीवनको एक अभिन्न अंग हो । यो प्रक्रिया ५ देखि सातदिनसम्म चल्छ भने कतिपय महिलाको ४ देखि ५ दिनसम्म चल्छ । यस क्रममा महिलालाई चिडचिडाहट हुने, शरिर दुख्ने, पेट दुख्नेलगायतका विभिन्न समस्या देखा पर्न थाल्छन् ।सामान्यतया सबैलाई लाग्छ कि महिनावारीको समयमा हुने रक्तश्राव रातो नै हुन्छ । तर वास्तवमा त्यसो हुदैन । रगतको बाक्लो, खैरो, गाढा रातो र गुलावी रंगको हुन्छ । रगतका विभिन्न रंगले तपाईको स्वास्थ्य स्थिती ठिक छ कि छैन भन्नेबारे संकेत गर्दछ । स्त्री रोग विशेषज्ञका अनुसार महिनावारीको रगतले यस्ता संकेत गर्छ ।
Previous खवरदार ! सरकारी अनि सस्तो भनेर फस्नु होला सिभिल हस्पिटलमा ! असलमा यस्तो छ वास्तविकता
Next यी युवती प्रत्येक रात आफ्नो सर्पसँगै सुत्थिन तर… एकदिन डाक्टरले खोले भयानक सत्य